” Nasiib Darro, Somaliland, Illaa Hadda Ma Helin Aqoonsi Caalami Ah, Waana Masuuliyad Saaran Xukuumadda Aan Madaxda Ka Ahay, Ee Aad Safiiradda U Tihiin. Madaxweyne Axmed Siilaanyo |
” Nasiib Darro, Somaliland, Illaa Hadda Ma Helin Aqoonsi Caalami Ah, Waana Masuuliyad Saaran Xukuumadda Aan Madaxda Ka Ahay, Ee Aad Safiiradda U Tihiin. Madaxweyne Axmed Siilaanyo
Hargeysa-(GNN)-Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa habeenkii xalay kulan la qaatay safiirada Somaliland ee dalalka dibada,kadib shirkii wasaaradda arimaha dibadu iskugu yeedhay.
Kulankan oo qasriga madaxtooyada ka dhacay ayaa waxa uu madaxwaynaha Somalialnd Axmed Siilaanyo u mahadceliyay wasiirka arimaha dibada shirka uu iskugu yeedhay safiirada ee xogta badan lagu kala qaatay.
“Waxaan jecelahay in aan uga mahad-celiyo Wasiirka Arrimaha Dibedda Dr. Sacad Cali Shire shirweynaha uu isugu yeedhay dhammaan Wakiilladii Somaliland u fadhiyey dallalka dibedda. Waxaan aaminsanahay in kulankan wada jirka ee aad isugu timaadeen aad xog badan ku kala qaadateen, isla markaana qorshe hawleed diblomaasiyadeed diyaariseen, kuwaas oo dardargelin kara siyaasadda Arrimaha Dibedda Somaliland”ayuu yidhi Madaxwayne Siilaanyo.
Madaxwayne Axmed Siilaanyo aya safiirada kula dardaarmay inay xil culus u hayaan dalkan iyo dadkan.
“Xaqiijinta himilladani waa xilka iyo waajibka ugu culus ee aad qarankan u haysaan. Wasaaradda Arrimaha Dibedda waxa la gudboon inay qiimayn iyo dib-u-eegis joogta ah ku samayso heerka xil gudashada Xafiisyada Wakiillada Somaliland ee Dallalka Dibedda”ayuu yidhi Siilaanyo.
Madaxwaynaha Somaliland Axmed Siilaanyo waxa uu sheegay inaanay Somaliland wali ka helin caalamka aqoonsi ,balse ay ka midho dhalin doonto sidii ay u gaadhi lahayd.
“Somaliland waa qaran madax bannaan oo buuxiyey dhammaan shuruudihii looga baahnaa, hase yeeshee nasiib darro ilaa iyo hadda ma helin aqoonsi caalamiya. Ka midho-dhalinta arrintani waa mas’uuliyad saaran xukuumaddan aan madaxda ka ahay, idinkuna aad safiirrada u tihiin. Sidaas darteed, waxaan idiinku guubaabinayaa in aad xil weyn iska saartaan sidii aynu u xaqiijin lahayn in qarankani ictiraaf buuxa ka helo beesha caalamka”ayuu yidhi Madaxwayne Siilaanyo.